Wararkii U danbeeyay Qarax iyo weerar wada socda oo goor dhaw lagu qaaday Hoteel Afrik ee magaalada Muqdisho | SMC
Home WARARKA MAANTA Wararkii U danbeeyay Qarax iyo weerar wada socda oo goor dhaw lagu...
Weerar ku bilaawday ismiidaamin ayaa goor dhaw lagu qaaday Barkootarool oo ku taala waddada aada garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, iyadoo Qaraxa ismiidaamin ah kaddib wararku sheegayaan in dabley hubeysan gudaha u galeen Hotelka Afrik ee ku yaala isla goobta.
Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu waramayaa in lagu dhuftay ilinka hore ee Hoteelka oo dhinaca kalana ay taalo Bartakooltarool ee laga socdo dhaqdhaqaaqa waddada gasha Garoonka diyaaradaha Aada Cadde.
Rasaas ayaa laga maqlayaa gudaha Hoteelka mana jirto faah faahin rasmi ah oo ilaa iyo hadda laga hayo khasaaraha ka dhashay Qaraxa iyo xaalada guud ahaan goobta uu weerarku ka dhacay.
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ayaa gaaray goobta, waxaana ay bilaabeen in ay la dagaallamaan kooxda weerartay Hoteelka.
Waxaa jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerarkan ismiidaaminta ah, waxaana socda gurmad loo fidinayo dadka waxyeelada gaartay
Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayan im Hotelka la weeraray laga maqlayo rasaas iyo bambaanooyin ka dhacaya gudaha Hotelka Afrik ee Weerarka lagu qaaday.
Ciidanka Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa Saraakiil Ciidan iyo ganasato kasoo badbaadiyay Qaraxa ka dhacay Hoteelka Afrika ee Muqdisho.
Saraakiisha Ciidan ee laga soo badbaadiyay waxaa ka mid ah Generaal Indhacade, Labo Afle iyo Xuseen Goley oo ah Milkilaha hoteelka.
Waxaa Ciidanka sidoo kale ay kasoo badbaadiyeen hoteelka Odayaal la sheegay in uu shir uga socday goobta.
Wali waxaa laga maqlaya gudaha hoteelka rasaas xoog leh.
Previous articleWafdi uu hoggaaminayo James Swan oo gaaray Magalada kismaayo
Next articleWufuud kusii qul quleysa Magaalada Dhuusamareeb & amniga oo la adkeeyay